Macalin Atletico: “Griezmann Wuxuu Qalmaa Inuu Ka Garab Dheelo Messi, Wuuna Aadi Karaa Barca” %
Tababaraha kooxda kubada cagta Atletico Madrid, ninka lagu magacaabo Diego Pablo Simeone, ayaa wuxuu sii huriyay xiisada ka taagan in Hogaamiyaasha La Liga ee Barcelona ay lasoo wareegayaan weerar yahankooda gaaban ee Antoine Griezmann.
Laacibkaan dalka Faransiiska udhashay ayaa waxaa si weyn loo hadal hayaa inuu usoo dhaqaaqi doono suuqa soo socdo ama dhamaadka xili ciyaareedkan Camaaliqada horyaalka wadanka Spain, ee Bluagrana, islamarkaana heshiiskiisa uu dhacay.
Griezmann, ayaa wuxuu kamid yahay gooldhaliyaasha ugu halista badan Yurub, isagoona saddex gool dhaliyay ciyaartii ay kooxdiisa 5-0 kusoo xaaqday Seville, ka hor inta aysan la dheelin Axadii Barcelona, markaasoo uu awoodi waayey inuu shabaqa gaaro.
“Griezmann, wuxuu waqti xaadirkaan yahay mid wanaagsan, waana umaleynayo xaaladi tani [Inay macquul tahay inuu Barcelona aado,” ayuu si cad usheegay Diego Pablo Simeone, mar uu la hadlayay warbaahinta ka hor ciyaartii Barcelona.
“Waxaan mar walba sheegayaa in Antoine [Griezmann] uu yahay mid aan caadi ahayn, marka uu joogo xaaladiisa ugu fiican, wuxuuna uqalmaa inuu ka garab dheelo [Lionel] Messi,” ayuu hadalkiisa kusii daray hogaamiyahaan reer Argentina.
“Marka laga reebo seddexda ama afartii bilood ee ugu horeysay ee [waayihiisa] Atletico iyo bilowgii xilli ciyaareedka, wuxuu mar walba siiyay faa’idooyin [kooxdiisa] joogto ah, taasoo ah mid ku adag kubada cagta,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Atletico MadridBarcaBarcelonaDiego SimeonaGriezmannMessi